Pot Pouche Fototra Hot Ary Mangatsiaka | WOWOW
Home / Fitaovana an-dakozia / Faucets lakozia ao an-dakozia / WOWOW Chorme amin'ny vilany famenon'ny vilany ara-barotra
Amazon US Amazon CA Amazon MX Fametrahana torolàlana PDF
Faucet amin'ny rindrina ho an'ny HOT & COLD: tsy toy ny faucet famenoana vilany nentim-paharazana chrome misy lavaka iray fotsiny ho an'ny rano mangatsiaka, wowow faucet famenoana vilany dia natao lavaka 2 mba hampifangaroana rano mangatsiaka sy mafana, manome traikefa bebe kokoa sy mora ampiasaina
Arovy ny fahasalamana: Faucet varahina mafy vita amin'ny varahina madio avo lenta, tsara kokoa noho ny metaly hafa, ny varahina dia miasa tsara amin'ny fisorohana ny firaka, ny mineraly ary ny harafesina, noho izany dia azo antoka ny fenitry ny rano, miaro ny fahasalaman'ny fianakavianao
Tehirizo ny habaka: 2 mitantana 2 lavaka miforitra rindrina-tendrombohitra fomba mamela toerana sy efitra ampy, roa tonon-taolana ny faucet sy 360 degre spout fihodinana manampy hanamora kokoa, azonao atao ny misintona na misintona moramora amin'ny fanaovana asa maro.
Karazana kalitao: vita amin'ny chrome toy ny fitaratra, mamirapiratra sy mamirapiratra, izay tsy levona ary maharitra; Neoperl aerator dia afaka manome fanerena tsy tapaka sy mahitsy mikoriana rano; Ny fanerena avo lenta ABS aerator dia tsy dia mitsimoka, mitete maimaim-poana seramika cartridge maharitra
Warranty, fanohanan'ny mpanjifa: Warranty 5 taona sy fanohanana ara-potoana ny mpanjifa no atolotra. Izy io dia voarakotry ny fiverenana voafetra 90 andro. Mifandraisa aminay amin'ny alàlan'ny baiko.
Na mpahandro na mpahandro hafahafa, ity rindrina feno fikorisana rindrina feno rano ity 2311400C dia mitondra tanana manampy any an-dakozia. Nofenoina fantsom-bokotra seramika mba hiantohana ny fiasan-drongony tsy misy fotaka, indrindra ho an'ny fiakarana ao anaty mpahandro. Ho tonga eo afovoany ny saina ho avy, satria ity mpanefy vilany ity dia misy varahina avo lenta ary atolotra amin'ny famatsiam-bola isan-karazany maro. Ireo kiraro fanamboarana mahazatra dia tsara miaraka amin'ny fomba rindra nentim-paharazana sy tetezamita.
Fampahalalana momba ny vokatra momba ny vokatra:
Faucet amin'ny rindrina ho an'ny HOT & COLD: tsy toy ny chrome faucet filler nentim-paharazana miaraka amina lavaka iray fotsiny ho an'ny rano mangatsiaka, ny faucet an-dakozia wowow dia natao lavaka 2 hifangaro rano mangatsiaka sy mafana, manome fahafaha-manao bebe kokoa sy traikefa tiana ho an'ny mpampiasa.
Arovy ny fahasalamana: poketra vita amin'ny varahina vita amin'ny varahina madio tsara, tsara kokoa noho ny metaly hafa, tsara ny varahina amin'ny fisorohana ny firaka, ny mineraly ary ny ahitra, ka miantoka ny fenitry ny rano, miaro ny fahasalaman'ny fianakavianao
Tehirizo ny habaka: ny famaky 2 ny lavaka 2 mametaka ny rindrina misy rindrina misy rindrina dia ampy ny habaka sy ny efitrano, ny rantsana roa misy ny gripo ary ny fihodinana faranana 360 degre dia manome fahafaham-po bebe kokoa, azonao atao ny misintona na misintona moramora amin'ny fanaovana asa maro.
Fanamboarana kalitao: vita amin'ny kromo toa tara, mamirapiratra ary mamiratra, izay tsy malefaka sy matevina; Ny aoperl Neoperl dia afaka manome tsindry maharitra sy fikorianan'ny rano mandeha tsy miova; ny fanerena mafy ny ailer ABS dia kely ny famoretana, ny famonosana ny baoritra maimaim-poana
Haben'ny fenitra amerikana: 5.9 '' (halavan'ny lavaka), 13.1 '' (halavany), 1/2 "NPS ka hatramin'ny 1/2" NPT (mpampitohy mahazatra amerikana), tsy mila manodinkodina ny farany amin'ny faucet ianao raha toa ka lalina ny lavaka rindrina; Warranty 5 taona voafetra, 24/7 Fanohanana ho an'ny mpanjifa: fiantohana voafetra manohitra ny fivoahan'ny rano, mitete, tapaka ary mahatapitra kilema, voasaron'ny fiverenana maimaimpoana 90 andro ihany koa. Azafady mifandraisa amin'ny mailaka❤service@wowowfaucet.com
Ampahany : 2311400C Sokajy: Fitaovana an-dakozia, Faucets lakozia ao an-dakozia Tags: Ary mbola hanohon, Mpanefy vilany
19.84 X 7.8 X 5.08 santimetatra